Sargaal katirsan ciidamada nabadsugida Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSargaal katirsan ciidamada nabadsugida Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho
September 17, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sargaal katirsan ciidamada nabadsugida Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan ciidamada nabadsugida Soomaaliya ayaa waxaa maanta oo Axad ah gudaha Muqdisho ku dilay dablay Al-Shabaab ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka caafimaadka iyo ammaanka ah.
Dablay katirsan Al-Shabaab oo watay gaari ayaa rasaas ku furay gaariga waday Maxamuud Xasan Macalin oo loo yaqaan Qooley gudaha degmada Dharkaynlay ee Muqdisho, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Qoolay ayaa loo qaaday isbitaalka balse mar dambe ayaa waxa uu u geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Labo kamid ahaa ilaaladiisa ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida ay baahisay idaacada afka Al-Shabaab ku hadasha ee Radio Al Andalus.